धन्यवाद हिमानी ट्रष्ट
सामाजिक सेवामा लागेको हिमानी ट्रष्टले गत शुक्रवार सोल्टी होटलमा तिहार छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने हेतुले समाजका विभिन्न महानुभावलाई निम्त्याएर र फोटो सेसन गरेर चियापान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ट्रष्टकी अध्यक्ष पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले स्वयम् ढोकामा निम्तालुलाई स्वागत गर्नु भएको थियो भने संरक्षक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत पूर्व युवराज पारस, पूर्व नवयुवराज हृदयन्द्रको पनि उपस्थिति थियो । यो कार्यक्रमले राजसंस्थाको संस्कार पनि देखाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले दसैंको अवसरमा यस्ता चियापानको आयोजना गर्ने गरेका छन् । हिमानी ट्रष्टले तिहार र छठका अवसरमा चियानको आयोजनाको थालनी गर्नु राम्रै हो । गणतन्त्र अघिभन्दा गणतन्त्रपछि राजसंस्थासँग यस्ता पर्वहरूमा प्रशंसक, समर्थकहरूले नजिकिने र बुझ्ने अवसर बढी पाउने गरेका छन् । यस्तै अवसरले टाढिएका राजपरिवारको पुनर्मिलन पनि भएको अर्थमा यो चियापानलाई हेरिएको छ । हिमानी ट्रष्ट अनेक अर्थमा धन्यवादको पात्र छ ।
हिमानी ट्रष्टले दुःखमा परेका, विपदमा रहेकालाई गरेको सहयोगले आम नेपालीमा राजसंस्थाका बारेमा हामीलाई गलत बुझाइ रहेछ भन्ने पारिदिएको छ । जनआन्दोलनको समयमा मूर्दावादको नारा लगाउनेहरू अहिले थक्क थक्क परेका छन् । राजसंस्था अति सामान्य परिवार रहेछ भन्ने सबैले बुझेका छन् । राजदरवार जो संग्रहालय हो, भ्रमण गर्नेहरूलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति देखेपछि यति त हाम्रै परिवार, घरमा हुनछ भन्न वाध्य भएका छन् । झन राजा र उनका परिवारले आम नेपालीझैं मुलुकका विभिनन स्थानको भ्रमण गर्दा र विभिन्न होटलहरूमा गएर नागरिकले झैं खाजा खाएको, रमाइलो गरेको देख्नेहरू वहाँहरू त ज्यादै सामान्य रहेछन् भन्ने अनुभूति गरिरहेका छन् । वास्तवमा नेपाली राजपरिवार एकदमै सामान्य परिवार हो । नेपाल र नेपालीको सुख दुःखका साथमा देखिन्छ राजसंस्था । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भ्रमित पारिए, अब झल्यास्स भइसकेका छन् नेपाली जनता । सबैले अनुभूत गरिसके– राजतन्त्रमा सुरक्षित थियौं, मुलुक बचेको थियो । अहिले जता पनि भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण । सेटिङ्, भागबण्डा, नातावाद, व्यभिचार । परमादेशवाला पक्षहरू नै परमादेश दिने प्रधानन्यायधीशविरूद्ध महाभियोगको हल्ला गरिरहेका छन् । राजीनामा माँगिरहेका छन् ।
यो कस्तो गठबन्धन सरकार होला, जसले अध्यादेशले संविधान मिच्यो र स्वार्थ सिद्ध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरेर संविधान स्थापित पा¥यो । परमादेश प्राप्त सरकार जेमन्त गरिरहेको छ । समस्या प्रधानन्यायाधीशमा होइन, समस्या राजनीतिमा छ । नेताहरूमा छ । ताक परे संविधान, नत्र सडकगान गर्ने प्रवृत्तिमा छ । ०४६ साल अघिका घनेन्द्र बहादुर सिंह, नयनबहादुर खत्रीलाई सम्झनेहरू लौ न मुलुक चौपट भयो भन्न थालेकाछन् । त्यो समयमा सर्वशक्तिमान दरवारको दबाबलाई पनि टेर्ने थिएन अदालत । अहिले त नोटको बिटो, राजनीतिक दबाबमा लत्रक्कै पर्छ । पार्टीले कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि फैसला संविधानबाट होइन, पार्टीको निर्देशनमा आउनु स्वभाविक हो । यसरी न्याय कानुन कहाँ पुग्ला ? सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, अहिलेका चोलेन्द्र शमशेर कसरी न्यायाधीश भएका थिए, जगजाहेर छ । निष्पक्ष रहनुपर्नेहरूको राजनीतिकरणबाट न्यायको कसरी आशा गर्ने ? अनि प्रशासनमा राजनीतिकरण, पार्टीका कार्यकर्ताको मनपरीतन्त्र ? शिक्षादेखि अन्य क्षेत्रमा पनि पार्टीकरण । कुनै पनि काम कि त राजनीतिक कारण वा घूस नभई हुँदैहुन्न । कुनै नेता भ्रष्टाचारले नडामिएका छैनन् । तिनका कार्यकर्ता भ्रष्टाचार बढाइरहेका छन् । एउटै किसिमको समस्यामा एउटालाई छुट, अर्कालाई दण्ड । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलले छुट पाए, माधव नेपाल, बाबुरामलगायतका अन्य साना कर्मचारीलाई मुद्दा । यो त सत्ता र शक्तिको खेलमात्र हो । अहिले माधव पक्ष सत्तामा छ, कसले छुने उनलाई ? आफ्नालाई जोगाउने, अर्कालाई फसाउने । अदालत यस्तै सेरोफेरोमा रमाउने । यो मुलुकमारा प्रवृत्ति हो । यहीकारण निष्पक्ष अभिभावक चाहियो भनेको हो । हरेक नागरिक यस्तै माग गर्न थालेका छन् । मुलुक यसरी नै चलेको छ । गणतन्त्रवादीहरूले आमनेपालीलाई मात्र होइन, मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत बदनाम गराइदिए । अमेरिकाजस्तो मित्रविरूद्धसमेत नारा र जुलुस गराइयो । अब सबै खालेहरू निराश भएर राजसंस्थामा आशा देख्न थालेका छन् । राजसंस्थासँग पहुँच बढाउनकै लागि हिमानी ट्रष्टले गरेको यस्ताचियापान कार्यक्रम यसकारण महत्वपूर्ण छ । समाजसेवा र समाजमैत्री व्यवहारको बढोत्तरी नै हिमानी ट्रष्टको उद्देश्य हुनुपर्छ । हिमानी ट्रष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।